HypeAuditor: Yako Influencer Kushambadzira Stack Ye Instagram, YouTube, TikTok, kana Twitch
Chitatu, September 29, 2021 Chitatu, September 29, 2021 Douglas Karr
Kwemakore mashoma apfuura, ini ndakanyatso kumisikidza yangu yakabatana uye inokurudzira nzira dzekutengesa. Ndiri kunyatsosarudza mukushanda nemabrands - kuona kuti mukurumbira wandakavaka haushoreke ndichiisa tarisiro nemhando dzekuti ndingakwanise kubatsira sei. Vanokanganisa vanongova nesimba nekuti vane vateereri vanovimba, vanoteerera, uye vanoita pane avo vakagovana nhau kana kurudziro. Kutanga kutengesa crap uye iwe ucharasikirwa
Kushambadzira kwePezvazvinogona Kutibatsira Sei Kugadzirira Remangwana Risingachinji?
Chitatu, September 29, 2021 Chitatu, September 29, 2021 Albert Nieto
Google munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuti iri kunonoka zvirongwa zvayo zvekubvisa chechitatu-bato makuki mune iyo Chrome browser kusvika muna 2023, gore rakatevera kupfuura zvaraironga pakutanga. Nekudaro, nepo chiziviso chingaita senge nhanho yekumashure muhondo yekuvanzika kwevatengi, iyo indasitiri yakafara iri kuenderera mberi nekuenderera mberi nehurongwa hwekudzora mashandisiro emakuki echitatu-bato. Apple yakatanga shanduko kuIDFA (ID yeVashambadziri) sechikamu cheiyo iOS 14.5 yekuvandudza, iyo
Chipiri, Gunyana 28, 2021 Chipiri, Gunyana 28, 2021 Maka Emond
Gore rinotevera, Kushanda Kwekushambadzira kunoshandura makumi matatu! Yep, iwe unoverenga izvo chaizvo. Uye nepo zvichiratidzika senge iko zvino kwese kwese tekinoroji iri diki zvekuti ichine mapundu, chokwadi ndechekuti iyo yekushambadzira automation chikuva (MAP) ikozvino yakaroora, ine mbwanana, uye ingangotanga mhuri munguva pfupi. Mune Demand Spring yazvino ongororo yekutsvaga, isu takaongorora mamiriro ekushambadzira otomatiki tekinoroji nhasi. Isu takafumura kuti ingangoita hafu yemasangano ichiri kutambura chaizvo